wararkii ugu dambeeyay ee dagaaalo iyo iyo qaraxyo khasaare ka dhasheen. – Shabakadda Amiirnuur
wararkii ugu dambeeyay ee dagaaalo iyo iyo qaraxyo khasaare ka dhasheen.
October 19, 2020 9:30 am by admin Views: 68
Qarax ayaa Xalay lala beegsay Ciidamada Itoobiya ee ku fariisinka ku leh Magaalada Halgan ee Gobalka Hiiraan waxaana la aamisan yahay in khasaare ka dhashay.
Dhawaqa qaraxa ayaa laga maqlay deegaanda u dhaw halgan iyo kuwo ka durugsan qaarkood waxaana xusid mudan in sidaan oo kale horay qaraxyo iyo weeraro toos ah loola beegsaday Itoobiyaanka Halgan fadhiya oo dadka deegaanka dhibaato ku haya.
Qaraxaanu waxa uu ku soo aadayaa iyadoo askar jabuutiyaan ah oo Itoobiyaanka la shaqeeya u dhinteen dhaawacyo ka soo gaaray qaraxyo doraadka dhacay inta u dhexeysa Magaalooyinka Jalalaqsi iyo Buulo Barde ee Gobalka Hiiraan.
Sidoo kale qaraxyadaas iyo mid kale oo shalay ka dhacay duleedka jalaqsi iyo kamiin doraad galab ka dhacay duleedka Buulo barde waxaa ku waxaa ku dhintay ku dhawaad 15 askerioo ka tirsanaa Dowladda federaalka ah
Geesta kale weerar ayaa shalay gelinkii dambe lagu qaaday ciidamada Maamulka Jubbaland iyo kuwa Dowladda Federaalka ah ee fariisimaha ku leh Deegaanka Baar sanguuni ee duleedka Magaalada Kismaayo.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerartay fariisimahaan xog dheeraad ahna kama helin khasaaraha ka dhashay weerarkaan inta uu le eg yahay.
Dhianca kale Magaalada Muqdisho shalay waxaa lagu dilay Ninka tirsnaaa Sirdoonka Dowladda federaalka ah kaasoo dhibaato ku hayay dadka ku dhaqan deegaanada uu ka howl galayay ee Caasimadda ka tirsan.